“ဘာသာရေးပဋိပက္ခပြဿနာတွေဟာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးကို ဘယ်လောက်ထိခိုက်သလဲ” | Lumyo Chit
May 25, 2013	By lumyochit	(၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂ဝ)ရက် စနေနေ့ည VOA အမေရိကန်အသံ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၏ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်မှ ရှေ့နေဦးကိုနီ ၏ ဆွေးနွေးပြောကြားချက်)
နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြောင်းမယ်ဆိုပြီး (၂ဝ⁠ဝ၈)ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ (၂ဝ၁ဝ)က ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ လွှတ်တော်တွေနဲ့ ရှေ့ ကိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းနေတာလား? အကြမ်းဖက်စနစ်ကို လုပ်နေတဲ့ လူတွေကရှိနေသလား? မေးစရာမေးခွန်းတွေဖြစ်လာတယ်။
ဒီပဋိပက္ခတွေကို ကျော်လွှားဖို့နည်းလမ်းက တော်တော်လွယ်တယ်ဗျ။ ဒါကိုမပြောခင် ရှေ့ကဖန်တီးတဲ့သူက ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တော်တော်လေး မူတည်နေသလို၊ နှစ်ပေါင်း(၅ဝ)စစ်တပ်က လက်နက်အင်အားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုလွတ်မြောက်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ လူများစုဘာသာဝင်က ပြန်ဖိနှိပ်တဲ့စနစ်ကို သွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျ။
ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ ဒါတွေဟာ ဖြစ်ခွင့်ပေးထားလိုိ့ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။ မဖြစ်စေချင်ရင် ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ (၂ဝ⁠ဝ၇)ခုနှစ် သံဃာတော်တွေ မေတ္တာပို့ဆန္ဒပြတယ်။ အဲဒါကို မဖြစ်စေချင်တဲ့အခါမှာ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဖြေရှင်းပစ်လို့ရတယ်။ ဒီသံဃာတော်တွေက မေတ္တာပို့တာ။ ဘယ်အိမ်မှမီးမရှို့ဘူး။ ဘယ်သူ့မှမသတ်ဘူး။ အဲဒါကို မလိုလားတဲ့အခါမှာ ချက်ချင်းရပ်ပစ်လို့ရတယ်။ အခု မိတ္ထီလာမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စ၊ လူတွေကိုသတ်တယ်။ မသေသေးတဲ့လူကို မီးရှို့တယ်။ ဗလီတွေ ကျောင်းတွေကို မီးရှို့တယ်။ ဗလီကျောင်း မီးရှို့တာ အိမ်တစ်လုံးမီးရှို့တာနဲ့ မတူဘူး။ အိမ်တစ်လုံးက လူတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ပဲ။ လူတစ်ယောက်ပဲ ထိခိုက်နစ်နာတာ။ ဗလီမီးရှို့တယ်ဆိုရင် အဲဒီဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူ အားလုံးရဲ့ အသည်းနှလုံးကို မီးရှို့သလိုဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလေး လုပ်လို့ရနေတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကို ရဲတွေအရှေ့မှာလုပ်နေတာ။ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရှေ့မှာ လုပ်နေတာ။ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေက ခွင့်ပြုထားလို့သာ လုပ်လို့ရတာပေါ့။ ကျွန်တော့်စကား နည်းနည်းလေး ကြမ်းချင်ကြမ်းမယ်။ တာဝန်ရှိသူက ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားက ဒါကျွန်တော်စွတ်စွဲ သလိုဖြစ် တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်မှာပြောစရာရှိတယ်။ ဥပဒေပေါ့ဗျာ။
ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ(၃ဝ၂)အရ လူသတ်မှကျူးလွန်ရင် အဲဒီလူကို သေဒဏ်ခင်ဗျ။အဲဒီလို လူသတ်တဲ့သူကို ဘယ်အရပ်သားမဆို သတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ ပြစ်မှုဆိုင် ရာဥပဒေပုဒ်မ(၁ဝဝ)အရ သတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို သေလောက်အောင်လုပ်ရင်၊ လူတစ်ယောက်ကို နာလောက်အောင်လုပ်ရင်၊ လူတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်ရင်၊ နောက် လူတစ်ယောက်ကို ဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့နည်းနဲ့ ကာမကိုရယူရင်၊ လူတစ်ယောက်ကို ခိုးရင်၊ လူတစ်ယောက်ကို ချုပ်ထားရင်၊ အဲဒီအချက်(၆)ချက်မှာ သတ်ပစ်လို့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက မိတ္ထီလာမှာ လူတွေကို အေးအေးဆေးဆေး သတ်နေတယ်။ အဲဒီလိုလူသတ်နေတဲ့သူကို ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်အရ တရားခံတွေကို ပစ်သတ်ပစ်လို့ရတယ်။ နောက် ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ(၄၃၆) မီးဖြင့်အကျိုးဖျက်ဆီးမှုလို့ခေါ်တယ်။ အိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့သူကို ပစ်သတ်ပစ်လို့ရတယ်။ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်ထိုက် တဲ့အမှုကို ကျူးလွန်တယ်။ ဒီလိုလူကို ပစ်သတ်လို့ရတယ်။ ဒီလိုဥပဒေတွေ ရှိရဲ့သားနဲ့ တကယ်တမ်း လူသတ်နေတဲ့ဟာ၊ အိမ်တွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေကို အရေးမယူဘဲ ခွင့်လွှတ်ထားတဲ့အတွက် ဒီပြဿနာဟာ ကြီးသွားတယ်။ အဲဒီတုန်းက အရေးမယူနိုင်ခဲ့ရင်လည်း အခုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဒီလူတွေ လုပ်တဲ့ဟာတွေ အားလုံးဟာ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေရှိ တယ်ခင်ဗျ။ ဒီလူတွေကို ထိ⁠ထိရောက်ရောက် အရေးယူလိုက်ရင် ဒီပြဿနာဟာ ရှေ့ဆက် မလုပ်ရဲတော့ဘူး။ အခု အဲဒီလို အရေးမယူတဲ့အတွက် ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းအထိကူးတယ်။ ဆိုလိုတာက နံပါတ်(၁)က စကတည်းက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီကိစ္စကို လုံးဝခွင့်မလွှတ်ရဘူး။ တားဆီးရမယ်။ အဲဒီမှာတစ်ချို့ကပြောသေး တယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တချို့က ပြောသေးတယ်။ ရဲတွေက အမိန့်မရလို့ပါဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ ရဲက အမိန့်တောင်းစရာမလိုဘူး။ အဲဒါကျွန်တော် အတိအကျပြောမယ်။ ရဲလုံးဝအမိန့်တောင်းစရာမလိုဘူး။ ပစ်သတ်ပစ်လို့ရတယ်။ အာဏာပိုင်တွေဘက်က အရေးယူတဲ့နေရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာထက်ကို လုံးဝအရေးမယူဘဲ လွှတ်ပေးထား တယ်။ တာဝန်မဲ့တယ်။ အရေးယူရန်ပျက်ကွက်တယ်။ တာဝန်ယူဖို့ လုံးဝပျက်ကွက်တယ်။
[၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂ဝ)ရက် စနေနေ့ည VOA အမေရိကန်အသံ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်၏ တိုက်ရိုက်လေလှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ရက်မှ ရှေ့နေ ဦးကိုနီ၏ ဆွေးနွေးပြောကြားချက်များကို ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။]
← မိတ္တီလာမြို့ရှိ မုစ်လင်မ် သင်္ချိုင်းအား တစ်ပတ်အတွင်း ဖယ်ပေးရန် ဖိအားပေးလျက်ရှိ	မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများ ရပ်တန့်စေရန် အီရန်နိုင်ငံက အဆိုပြုချက် (၃)ရပ် တင်သွင်း →